जाडो - Best of Japan
होक्काइडोसँग लामो हिउँद छ र टोकियो, क्योटो र ओसाकाको तुलनामा धेरै चिसो छ। जाडोमा होक्काइडो यात्रा गर्दा, कृपया बाक्लो जाडोको लुगा तयार गर्नुहोस्। म डिस्पोजेबल तातो प्याक र समान उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु। सब भन्दा राम्रो जुत्ता हिउँ जुत्ता वा हिउँ पदयात्रा गर्ने जुत्ता (सुनोतोर) हो, तर यदि तपाईं शहर वरिपरि हिड्नुभयो भने तपाईं सामान्य स्नीकरहरूमा एन्टी-स्लिप उपकरणहरू संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ। यस लेखमा, मँ भन्छु कि तपाईले जाडोमा कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ हक्काइडोमा र बिभिन्न कपडाहरूको तस्वीर प्रदान गर्ने। म जाडो को लुगाहरु किन्न वा भाँडामा दिन को लागी केहि विचार दिनेछु। जाडो मौसममा होक्काइडोमा लुगा लगाउने कपडा असाहिकावा शीतकालीन उत्सवमा धेरै ठूलो हिउँका मूर्तिहरू प्रदर्शित हुन्छन्, होक्काइडो, जापान, यो नोभेम्बरदेखि अप्रिलको शुरुमा सर्छ, होक्काइडोमा नोभेम्बरमा हिउँ पर्न थाल्छ र मध्यबाट पर्याप्त मात्रामा स collect्कलन गर्न थाल्छ। डिसेम्बर को। हिउँ वर्षाको सब भन्दा ठूलो रकम जनवरी फेब्रुअरी देखि मध्य फेब्रुअरीसम्म हो। होक्काइडोको दक्षिणी भागमा अवस्थित हकोडाटमा अप्रिलको सुरूमा हिउँ हराउनेछ। सप्पोरो र असाहिकावामा पनि हिउँ अप्रिलको मध्य भागमा पर्न सक्छ। बिहान र साँझको कम तापक्रम जाडोको समयमा होक्काइडोमा -१० डिग्री सेल्सियस तल झर्नु असामान्य कुरा होइन। सडक सतह स्थिर र धेरै फिसलन हुन सक्छ। यसको कारणले गर्दा, कृपया होकाइडोमा जानु भन्दा अघि जाडोका लुगाहरू तयार गर्न नबिर्सनुहोस्। घर भित्री तातो हुन्छ मौसम क्षेत्रका आधारमा भिन्न हुन्छ, होक्काइडोको बिभिन्न ठाउँहरूमा पनि। यदि ...
फेब्रुअरीमा, जाडो उत्सवहरू सप्पोरो हिउँ उत्सव सहित, होक्काइडोमा आयोजना गरिन्छ। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै मानिसहरू यस समय होक्काइडो जाँदैछन्। तर फेब्रुअरीमा होक्काइडो एकदम चिसो छ। यदि तपाईं फेब्रुअरीमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया जाडोबाट पर्याप्त सुरक्षा नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा म फेब्रुअरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा विवरणहरू प्रदान गर्दछु। यस लेखले होकाइडोको फेब्रुअरीको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। स्लाइड मार्फत र महिना को लागी तपाइँ अधिक जान्न को लागी चयन गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। फेब्रुअरीमा होक्काइडो बारे प्रश्न-उत्तर होक्काइदोमा फेब्रुअरीमा हिउँ पर्दछ? यो फेब्रुअरी मा होक्काइडो मा धेरै राम्रो स्नोड। त्यहाँ धेरै हिउँको थुप्रो हुन सक्छ। फेब्रुअरीमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? फेब्रुअरी जनवरी संगै धेरै चिसो समय हो। विशेष गरी फेब्रुअरीको पहिलो आधामा, दिनको अधिकतम तापक्रम लगभग जमिनभन्दा कम छ। होक्काइडोमा फेब्रुअरीमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? फेब्रुअरीमा, होक्काइडोमा तपाईंलाई पूर्ण शीतकालीन लुगा चाहिन्छ। होक्काइडोमा जाडोका लुगाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाईं हिउँ हिउँदको परिदृश्यको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्। फेब्रुअरीको शुरुमा, जाडो चाडहरू ...
यदि तपाइँ फेब्रुअरीको अवधिमा ओसाकामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो धेरै चिसो हुनेछ। त्यहाँ लगभग हिउँ छैन, तर बाहिर हिंड्दा तपाईंको शरीरलाई धेरै चिसो बनाउँदछ। कृपया कोट जस्ता तपाईको सुटकेसमा जाडोका लुगाहरू राख्न नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म फेब्रुअरीमा ओसाका मौसम वर्णन गर्दछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। महिना को बारे मा अधिक जान्न को लागी चयन गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। ओसाका फेब्रुअरीमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: फेब्रुअरीमा ओसाकामा तापक्रम परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 30 1981१-२०१०) जब यो चिसो हुन्छ, डिस्पोजेबल शरीर तापक्रम धेरै उपयोगी हुन्छ = ओडोकमा एडोब स्टक, यो जनवरीको पछिदेखि फेब्रुअरीको शुरुमा वर्षको सबैभन्दा चिसो समय हो। कहिलेकाँही यसले सुकाउँछ, यद्यपि त्यहाँ कुनै हिउँ सulation्ग्रह हुँदैन। त्यहाँ फेब्रुअरीमा धेरै घमाइलो दिनहरू छन् तर हावा धेरै चिसो छ। यदि तपाईं चिसो मौसम मा राम्रो छैन भने, यो मफलर र दस्ताने संग राम्रो हुनेछ। यदि तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरूको वरिपरि जानुहुन्छ भने तपाईं बाहिर लामो अवधिको लागि बस्नुहुनेछ। किनभने तपाईंको शरीर चिसो हुनेछ, तपाईं होशियार हुनुपर्छ। जापानी औषधि पसल र सुविधा स्टोरहरूमा, तपाईं यस रूपमा डिस्पोजेबल बॉडी वार्मर किन्न सक्नुहुन्छ ...
टोकियोमा फेब्रुअरीमा धेरै घमाइलो दिनहरू हुन्छ तर यो प्रायः ठण्डा हुन्छ। यो विशेष गरी फेब्रुअरीको पहिलो आधा मा चिसो छ, त्यसैले आफ्नो कोट बिर्सनु हुँदैन सावधान रहनुहोस्। जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको फेब्रुअरी २०१ the को मौसम डेटाका आधारमा तपाईले कस्तो किसिमको कपडा प्याक गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा यस पृष्ठमा म केही उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाइँलाई जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियोमा फेब्रुअरीमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: फेब्रुअरीमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 2018 30१-२०१०) सँगै जनवरी, फेब्रुअरी जापानको सबैभन्दा चिसो अवधि हो। फेब्रुअरी र मध्य फेब्रुअरीको शुरुमा, यो न्यूनतम तापक्रम जाडोबाट तल झर्नु असामान्य हुँदैन। त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्, तर हावा कडा हुँदा यो धेरै चिसो हुन्छ। यो विरलै सुक्छ, तथापि, यो एक पटक यसले यातायात गडबड गर्दछ र ट्रेनहरू ढिलाइ हुन सक्छ। फेब्रुअरीको अन्त्यमा, यो जाडोदेखि वसन्त transitionतुमा संक्रमण सुरु हुन्छ। मौसम केही अस्थिर हुन्छ र बादल दिन बढ्नेछ। यदि तपाईं टोकियोबाट होक्काइडो, नागानोमा सर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने ...
जाडो मौसममा जापान यात्रा गर्दा तपाईले कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ? यदि तपाइँ आफ्नो देश मा चिसो जाडो को अनुभव छैन, तपाईं के लगाउनु पर्छ भनेर अचम्म लाग्न सक्छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जाडो मा जापान मा यात्रा को लागी को लागी लुगाहरु को बारे मा केहि सहयोगी जानकारी को लागी परिचय दिनेछु। मैले तल जाडोका लुगाहरूको तस्वीर पनि बनाए। यदि तपाईं होक्काइडो जाँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। हिउँदमा तपाईले राम्रो कोट वा जम्पर लगाउनुपर्दछ सामान्यतया होन्शु, क्युशु र शिकोको बसोबास गर्ने जापानीहरूले डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीको अन्तसम्म कोट वा जम्पर लगाएका हुन्छन्। यस बीच, जब हामी न्यानो भवनमा हुन्छौं, हामीले हाम्रो कोट निकाल्यौं र ज्याकेट लगाउँदछौं जस्तो कि शर्टमा स्वेटर। होक्काइडोमा बस्ने जापानीहरूले नोभेम्बरसम्म कोट वा जम्पर लगाउने छन्। डिसेम्बरमा तिनीहरूले होन्शुका जापानी मानिसहरू भन्दा थोरै मोटा कोट लगाएका छन्। जब यो चिसो हुन्छ, जस्तै साँझमा, तिनीहरू ऊन टोपी लगाउँदछन् वा तातो राख्नको लागि ग्लोभहरू लगाउँछन्। अर्कोतर्फ, ओकिनावामा, त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले जाडोमा पनि कोट लगाउँदैनन्। प्रत्येक ग्रीष्म ,तुमा, जापानीज द्वीपसमूह सबै ठाउँमा तापक्रममा एकदम मिल्दोजुल्दो हुनेछ (तातो तातो!), तर जाडोमा तापक्रम स्थानमा निर्भर गर्दछ। जाडोमा, म सिफारिस गर्दछु कि तपाई जानुहुने ठाउँको हिसाबले नै सबै भन्दा राम्रो कपडा तयार गर्नुहोस्। जापानी जाडोमा लगाउने लुगाहरूको उदाहरण तल जापानमा जाडोको फोटोहरू छन्। यी सम्भावित रूपमा छन् ...